စက်မှုဇုန်လူမီနီယမ်အပိုင်းဂိုဒေါင်တံခါး China Manufacturer
Home > ထုတ်ကုန်များ > overhead အပိုင်းတံခါး > စက်မှုဇုန်အပိုင်းတံခါး > စက်မှုဇုန်လူမီနီယမ်အပိုင်းဂိုဒေါင်တံခါး
1. Excellent ကလေတိုက်ခုခံ: ကောင်းသောခွန်အားနှင့်သံမဏိသားညှပ်ပေါင်မုတံခါးကို panel က။
2. Excellent ကအပူလျှပ်ကာ: တံခါးကို panel ကစုစုပေါင်းအထူ 40 မီလီမီတာရောက်ရှိ
3. High-အကြိမ်ရေစစ်ဆင်ရေး: Torsion နွေဦးချိန်ခွင်လျှာစနစ်ကနေစဉ်အတွင်းအများဆုံးဆွဲအင်အားသုံး counteracts
4. auto-လက်စွဲစာအုပ်ကို dual စစ်ဆင်ရေးသည် Modes: ပါဝါပျက်ကွက်သို့မဟုတ်ပျက်ပြားလည်းမရှိတဲ့အခါ, တံခါးကိုလက်စွဲစာအုပ်စစ်ဆင်ရေးကွင်းဆက်များကဖွင့်လှစ်ခဲ့သို့မဟုတ်ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ balance torsion နွေဦးစနစ်၏အများဆုံး counteracts
အဖွင့်၏ drag- အင်အားသုံး။ ဒါဟာနည်းနည်းအင်အားစုနှင့်အတူလက်ဖြင့်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
5. အမျိုးမျိုးသောတောင်တက် Modes သာ: တက်ခြင်း Modes သာမြို့ရိုးအပေါက်လေး၏အခြေအနေများသည်နှင့်အညီရွေးချယ်ထားသည့်နှင့်အမရရှိနိုင်အာကာသနိုင်ပါတယ် 1. နျ Standard တက်ပြီး mode ကို 2. အမြင့်တောင်တက် mode ကို3ဒေါင်လိုက်တောင်တက် mode ကို
1) ဂိုဒေါင်တံခါး Slat option ကို:
2) ဂိုဒေါင်တံခါးယာဉ်မောင်း: tubular မော်တာ option ကို:
3) ကားဂိုဒေါင်တံခါးအရောင် option ကို:
အဖြူ, မီးခိုးရောင်, မုန့် (စတိုင်များနှင့်အရောင်များအားလုံးကြင်နာကျွန်တော်တို့ကိုဖွင် '' လိုအပ်ချက်များချိန်ညှိကြသည်။ )
4) က Surface Finish ကို:
လျှပ်စစ်, ကို manual, အဝေးထိန်း
(1) ပစ္စည်းကို Select လုပ်ပါ: အသုံးပြုခြင်း 97% သန့်စင်လူမီနီယံ ingot
(2) ထုတ်လုပ်မှုနျ Standard: တရုတ်အတွက်အမြင့်ဆုံးစံ။
ကားဂိုဒေါင်တံခါးလှိမ့်လူမီနီယမ်အစဉ်အလာကြိတ်စက်တံခါးများများအတွက်အစားထိုးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ strips တွေအဆင့်မြင့်အပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကုသမျက်နှာပြင်နှင့်အတူကို double-layer ကိုအလွိုင်းလူမီနီယံနှင့်အထူးသဖြင့်သံမဏိလုပ်နေကြသည်။
HongFa ဂိုဒေါင်တံခါးအလှဆင်, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ functional ဖြစ်စေပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့်မြင့်စစ်ဆင်ရေးနည်းလမ်းများကို manual, လျှပ်စစ်နှင့်ဝေးလံခေါင်သီ-controlled အလိုအလျောက်သော့ခတ်ကိရိယာနှင့်အတူ incluses ။
ရိုးရှင်းပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောစစ်ဆင်ရေးနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်-ဆူညံသံအစဉ်အလာကိုလှိမ့တံခါး marchless ဖြစ်ပါတယ်။
aluminum တာဘိုင်မြန်နှုန်းမြင့်တလိမ့်တုံးရှပ်တာတံခါးကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တာဘိုင်ခက်မြန် Shutter တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PVC ကုလားကာသည် Fast ကြိတ်စက် Shutter တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လူမီနီယမ်အပိုင်းတံခါး အလူမီနီကားဂိုဒေါင်တံခါး စက်မှုဇုန်အပိုင်းဂိုဒေါင်တံခါး လူမီနီယမ်အလွိုင်းတံခါး လူမီနီယမ်အပိုင်း Vally တံခါး လူမီနီယမ်အလွိုင်း Rapid တံခါး လူမီနီယမ်အလွိုင်း Fatory တံခါး လူနေအိမ်အပိုင်းတံခါး